Nidaamka Federaalku Xal uma aha Dhibaatada Soomaalida
Qormadan waxaa igu kallifay inaan qoro saddex arrimood. Kow, waxaa jira dareen guud oo dadka Soomaaliyeed ay qabaan oo ku saabsan nidaamka federaalliga ah. Waxaa, inta badan, dadka Soomaaliyeed ka muuqata inay kalsooni dheeraad ah u hayaan nidaamkan iyadoo aadba mooddo inay rumeysan yihiin inuu xal u yahay keli-talisnimada iyo dulmiga ay madaxda dowladuhu sameeyaan. Labo, waxaa jira in hey'adaha caalamka ee iska xilsaara xallinta mushkiladaha ka dhasha dagaallada sokeeye ay mar kasta ku soo boodaan nidaamkan federaalliga ah. Runtii, sida aqoonyahannada qaar ay qorayaan, nidaamkani wuxuu noqday midka ugu sahlan ee islamarkiiba ku soo degdega maskaxda dadka farageliya dagaallada sokeeye iyadoo aanba si qoto dheer looga fekerin sida uu nidaamkani ula saanqaadi karo xoogagga iyo dhaqamada ka jira dalka ay mushkiladdaasi ka jirto (Lake & Rothchild, 2002). Saddex, waxaa nidaamkan si weyn u doonaya dowlado deris la ah Soomaaliya oo dano waaweyn oo istaraatiiji ah ka ! leh dalka. Dowladahaasi waxay maanta fursad u heystaan inay saamayn ku yeeshaan qaabka Soomaaliya ay dowladdeedu u dhismeyso. Iyagoo danahooda fiirsanaya, dowladahaas waxay iyaguna ka mid yihiin xoogagga riixaya in Soomaaliya loo sameeyo nidaam federaali ah.
Rabitaanka dadweyne badan oo aan ku slaysnayn aqoon, doonista hey'adaha caalamiga ah oo iyaguna fiirsanaya waxa u sahlan, iyo dibindaabyada dowladaha deriska ah qaarkood oo iyagu uu rabitaankoodu ku qotomo dantooda ayaa waxay keeneen in mar kasta oo Soomaalidu ay ikugu tagto shir in ay saxiixaan in dastuurka dalka lagu saleeyo nidaamka federaalka. Inta badan, shirarkii loo qabtay Soomaalida ee uu ugu danbeeyo kan hadda ka socda dalka Kenya waxaa qodobbadii la saxiixay ka mid ahaa qodob tilmaamaya in nidaamka federaalliga ah lagu saleeyo dastuurka Soomaaliya.
Haddaba, su'aalaha horyaal ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwooda waxgaradka ah, waxaa ka mid ah: Waa maxay nidaamka federaalku? Waa maxay waxtarka iyo waxyeellooyinka uu nidaamkani wato? Soomaaliya sida ay hadda ku sugan tahay ma yahay nidaam ku habboon? Dhaqaale ahaan, Soomaaliya ma awooddaa oo ma ka bixi kartaa? Ma jiraa qaab kale oo laga heli karo faa'iidooyinka ku jira nidaamka, islamarkaasna aan lahayn qasaarooyinka ku aasan nidaamkan? Xitaa haddii la qaato nidaamkan, ma jiraan waxyaalo caqabaad ah oo keeni kara in qasaarooyin waaweyn uu u geysto qarannimada Soomaaliya iyo aayaha iyo jiritaanka danbe ee ummadda Soomaaliyeed?
Qormadan waxaan ugu talagalay inaan intii aan karo uga jawaabo su'aalaha kor ku xusan. Waxaan ugu talagalay inaan dadka Soomaaliyeed la wadaago aragtidayda ku aaddan mowduucan iyo welwelka aan ka qabo nidaamkan. Haddii aan si kale u dhigo, qormadani ma ahan mid aan u qorayo koox mutacallimiin ah oo ku taqasussay siyaasadda iyo maamulka. Waxaan rajaynayaa inay furto dood iyadoo laga duulayo su'aasha weyn ee ah, maxay aayaha iyo qarannimada ummadda Soomaaliyeed u dhimeysaa ama ku kordhinaysaa haddii aan ku salayno dowladnimadeenna nidaamka federaalliga ah?
Qormadani waxay ka kooban tahay laba qeybood. Qeybta hore, waxaan ku sharxayaa waxa uu yahay asal ahaan nidaamka federaalku, iyo waxtarkiisa iyo waxyeelladiisa. Qeybta labaad, waxaan ku falanqeyn doonaa sida ay u adag tahay in nidaamka federaalliga ah laga hirgeliyo Soomaaliya. Waxaan ku soo gunaanadayaa aragtidayda ku aaddan arrintan oo ah inaan nidaamka federaalku xal u ahayn mushkiladda Soomaalida, islamark! aasna uusan ka shaqeyn Karin dalka.
Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa "hubsiino hal dhan baa la siistaa." Waxaan qabaa in haddii si furan looga doodo oo caqligu shaqeeyo waxaa dhici karta in la gaaro qaab isku dheellitiraya danta iyo himilada fog ee ummadda iyo rabitaanka jidbada ku salaysan ee hadda jira.
Waa Maxay Nidaamka Federaalku?
Rein in Somalia warlords, says candidate East African Standard
Asal ahaan, ereygu wuxuu ka yimid afka Laatiinka, wuxuuna Ingiriiska ka soo galay dhinaca luqadda Faransiiska. Xagga adeegsiga, ereyga "federal" iyo figradda uu ku salaysan yahayba waxaa markii hore loo adeegsan jiray qaab diini ah. Markii ugu horreysay macnaha ereygan loo isticmaalay wuxuu ahaa "heshiis" u dhexeeya aadamaha iyo Allaah. Macnahani wuxuu markii danbe isku rogay heshiiska ama axdiga ay dadku wada galaan. Markii danbana wuxuu macnaha ereygani ku danbeeyey heshiisyada siyaasiga ah ee ay gobolladu galaan marka ay samaysanayaan dowlad dhexe. Sida ay aqoonyahannada baara arrintani qoraan, muddadan danbe, ereygani wuxuu caan ku yahay oo lagu yaqaan siyaasadda, waana macnaha aan doonayo inaan warqaddan ku falanqeeyo (Elazar, 1987).
Marka macnihiisa guud la fiiriyo, nidaamka federaalku waa qaab lagu saleeyo habeynta siyaasadda dalka iyadoo loo qeybinayo awoodaha dastuuriga ah laba heer oo kala ah heer qaran iyo heer gobol (waa laga badin karaa heerarka labo haddii la doono) (Riker, 1964). Guud ahaan, labada heer ee kala ah dowladda dhexe iyo kuwa gobolladu waxay wadaagaan oo ka dhexeeya maamulka dalka. Dowladda dhexe waxay xukuntaa dalka oo dhan, halka ay dowladaha gobolladu xukumaan gobolladooda. Awoodaha uu dastuurku u qeybinayo labadan heer waxaa ugu muhiimsan awoodda sharci dejinta iyo awoodda canshuurista ((Elazar, 1987).
Marka sidan loo fiiriyo nidaamkan federaalku wuxuu suurta gelinayaa in dalku uu lahaado dowlad guud, iyadoo uu gobol walbana si hoose isku maamulayo oo arrimihiisa u gaarka ah ee uu kaga duwan yahay gobollada kale uu isagu xeerinayo. Sida caadiga ah, waxaa nidaamkani uu aad ugu habboon yahay marka ay jiraan dad laga badan yahay oo diin-ahaan, dhaqan ahaan ama luqad-ahaan ka duwan dadka ka badan ee ay dalka kula nool yihiin. Tusaale, gobolka Quebec ee dalka Canada waxaa ku dhaqan dad asalkoodii hore ka yimid dalka Faransiiska, kuna hadla Af-Faransiis, islamarkaasna heysta Mad-habta Katoolliiga ee Diinta Kiristaanka. Haddaba, sida inta badan laga dhegeysto idaacadaha, waxay doonayaan inay xor ka noqdaan dalka intiisa kale oo ay ka duwan yihiin. Sidoo kale, waxaa iyaduna jirta dalal badan oo ku yaal Yurub sida Germany, Switzerland, Belgium oo iyaguna ku kala duwan xagga diinta ama xagga luqadda. Dalalka ku dhaqma nidaamka federaalku waa 25 dowladood, waxayna ku kala ! yaallaan qaaradaha oo dhan.
Faafin: SomaliTalk.com | Sept 9, 2003 |